Tuesday November 10, 2015 - 06:22:25
Markii ugu horraysay mu'asasada Al-kataib ee garabka warbaahineed xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa filim maqal iyo maqal ah kasoo saartay dagaalkii taariikhiga ahaa ee degmada Janaale,kaasi oo dhacay 1,9,2015.
Isdaarka oo la daawan karo qadar 26 daqiiqa ah waxaa lagusoo bandhigayaa dagaalkii Janaale ee gallaaftay nolosha ku dhawaad 100 askari Yugaandheys ah.
Muuqaallada filimka lagu daawanayo waxaa kamid ah ciidamada shabaabul Mujaahidiin oo xoog ku gelaya saldhigga AMISOM ee Janaale iyo iyagoo mid mid u tooganaya ciidanka Uganda.
Mujaahidkii fuliyay Camaliyaddii istish-haadiga ee ka dhacday saldhigga Janaale ayaa filimka kasoo muuqanaya isagoo kalimad muhiim ah u diraya maleeshiyaadka DF-ka iyo shacabka soomaaliyeed ee muslimka ah.
Cabdullaahi Cali Cumar wuxuu kasoo jeedaa beesha Abgaal gaar ahaan jufada Agoonyar Gaabane isagoo dul saaran gaari lagasoo buuxiyay dhowr tan oo ah walxaha qarxa kunasii jeeda halkii uu camaliyadda ku geli lahaa ayuu digniin u dirayaa ciidamada shisheeyaha AMISOM.
Cabdullaahi wuxuu horay uga tirsanaa dowladda Federaalka isagoona tababar sarkaalnimo kusoo qaatay wadanka Jabuuti balse la shaqeynta shisheeyaha ayuu ka towbadkeenay wuxuuna noqday Mujaahid ugu dambeyn weerar naf-hurnimo ku qaaday saldhigga AMISOM ee Janaale
Sidoo kale Filimka waxaa lagusoo bandhigayaa askari katirsanaa ciidanka UPF-ta Uganda oo isagoo maxbuus ah gacanta ugu jira shabaabul Mujaahidiin.
Halkan ka Daawo Filimka Youtube
5 katirsan ciidamada ATMIS oo lagu dilay Sh/hoose iyo Maleeshiyaad ku dhintay duleedka Mahadaay.
Ciidamada Dowladda oo dilay sarkaal katirsan Waaxda Canshuuraha.
Itoobiya oo xukun daldalaad ah ku fulisay maxaabiis ay ka qabatay ciidanka Suudaan.